Ogaden News Agency (ONA) – Ilays TV oo xidigaha OYSU layeeshay Wareysiyo ku aadan Dabaaldaga Sanad guurada JWXO
Ilays TV oo xidigaha OYSU layeeshay Wareysiyo ku aadan Dabaaldaga Sanad guurada JWXO
Filimkan sare iyo sawirada hoose waxay kamid yihiin Barnaamijka Ilays Dood Cilmiyeed uu u qabtay Xidigaha OYSU -Xubno kamid ah ururka dhalinyarada Somalida Ogadeniya oo kusugan wadanka UK kanasoo jeeda Faracyada Ururada OYSU Denmark, OYSU Sweden, OYSU Australiya iyo OYSU UK.
Barnaamijkan oo ahaa mid loogu dabbaal dagayay Sanad guuradi 28aad ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa sidoo kale waxaa dhalintu ay ku ciideen farxada Dhimashada kaligii taliye Zenawi. Waxaana dood aad u qiimi badan laga sameeyay Zenawi dhimashadisa iyo saameynta ay ku leedahay halganka Shacabka Somalida Ogadeniya.
Waxaa dood cilmiyeedkan lagu sheegay in Zenawi uu dhintay midaasna ay tahay guul uu allaah siiyay shacabka Somalida Ogadeniya. Waxaa laga raba shacabka Somalida Ogadeniya meel kasta oo ay joogaan inay u guntadaan sidii ay u xoojin lahaayeen una saddex jibaari lahaayeen dadaalki ay xoriyada ugu jireen. Waxaa lagu qaada dhigay culeyska military iyo cadaadiska xooga badan ee gumeysigu saari karo dhulka Ogadeniya.
Qofkii la dagaalamayay Zenawiyow malese wuu baqtiyay, qofkii xoriyada u dagalaamayow wali Ogadeniya xoriyadi ma helin, Sidaas awgeed yaynaan is dhigan oo dhimashada Zenawi u arkin in guushii aynu wada gaadhnay. Qofkasta oo xoriyada shacabka Somalida Ogadeniya la daggaalama waan la daggaalayna Ethiopia taliskeeda inta uu xaqirayo aaya ka talinta shacabka Somalida Ogadeniya waxaa inaga dhexeeya xabad iyo halgan. waxa sidaas yiri xubin kamid ah xubnihi ka qeyb galay doodan,
Waxaa xubnaha dhalinta OYSU barnaamijkan si kulul ugu eedeeyeen madaxda Maamul goboleedyada Somaliya iyo kuwa iyaga oo xoriyad heysta u tacsiyadeeyay kaliggii taliye Zenawi oo ah nin xasuuq ka geystay dhulka Ogadeniya, Somaliya iyo goobo kale oo kamid ah geeska Afrika, Ninkan oo si gooni ah umada Islaamka ah daggaal cadowtinimo leh ku hayay ayaa lagu sheegay dadkii u tacsiyadeeyay dad ku xadgudbay diinta islaamka.
Hadaba dabaal daggii ay xubnaha firfircoon muujiyeen oo dhambaal tahniyadeed loogu diray ciidamada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo guud ahaan shacabka Somalida Ogadeniya meel kasta oo ay joogaan waxaad ka daawan doontaan Barnaamijyada Ilays. Hoosna ka daawo Sawiradi Barnaamijkan qeybo kamid ah.
ONA – London.
Asc waan idin salaamay ogaadeeniyana waxaan leeyahay guul laakiin majeclaysan sida mana ila wanaagsana in sidan gabdhaha iyo wii lashu is ku dhex galaan wayo waa in aynu ogaanaa in aynu nahay dad muslim ah oo ay inaga reebantahay is dhexgalka waa in lakala sooco marwalba gabdhaha iyo wiilasha walaa layaal si aynu unoqono umad aad u akhlaaq wanaagsan dhowrana diintooda iyo dhaqankooda suuban ha guulaysto halganka loogu jiro ogaadeenia